दुहुनो छैन तहर को चोखो
नेपाल भर्खरै आदिम युग बाट गुज्रे झैं लाग्छ । इतिहांस लामै भएपनी बिकासको खोजी भने अझै हुन सकी रहेको छैन मानिसहरु आफ्नै स्वार्थमा अझै पनि मस्त छन । राष्ट्रको बिकास आफ्नो बिकास वा पहिचान हो भन्ने कुराको ज्ञान आँफै मा सबै लाई थाहा भए पनि यस लाई लागु गर्ने क्रम भने अझै पनि हुन सकी रहेको छैन । आखिर यस्तो किन त ? किन कहाँ अल्झेका छन त नेपालीहरु ? राणा काल देखी नै शासकहरु केन्द्रिक्रृत हुन पुगे । गाउँ बस्ती लाई नेपाल सम्झेनन । काठमान्डौ लाई मात्र नेपाल भनिन्थ्यो त्यती बेला । प्रिथ्बिनारायण शाह का पाला पछीको नेपाल झन्डै महेन्द्र शाहको पाला सम्म पनि सुध्रिएन । जनता लाई सिक्षित गराउनु पर्छ भन्ने मान्यता रहेन । जनता सिक्षित भय राज्य हरण हुन्छ भन्ने मान्यता का मानिसहरु महेन्द्र का पाला सम्म थिए । तिनै को हाली मुहाली भयो नेपाल मा । शिक्षा के हो र यसले आफु र देसलाई कहाँ पुर्‍याउँछ भन्ने ज्ञान नहुनु र त्यती बेलाका केही शिक्षित गनिने हरु पनि चाकडी बाज संग सम्बन्धित हुनु नेपाली शिक्षा र जागरण अगाडि आउन नसक्नु हो । आफ्नै खर्चले पढेर विद्वान भए पनि तत्कालिन सरकार ले ब्यवस्था मिलाई गाउ तर्फ शिक्षक हरु पठाउने स्कुल कालेज खोल्ने आदी काम मा ढिला सुस्ती गरी रहेको थियो । यानी कि त्यस समयका सासक हरु अरु टाठा बाठा हुन सिक्षित हुन भन्ने चाहदैनथे । केही मानिस हरु पढेर पनि जागिर आँफै खोज्थे । त्यो पनि प्राइभेट । गाँउ गाँउ मा स्कुल खुलेकै थिएनन । बल्ल बल्ल गाउलेको बलबुतोमा खुलेको स्कुल मा मास्टरको अभाब हुन्थ्यो । गाउले मिलेर कसैको थोत्रो कटेरो मा मैना को २५ पैसा फिस तिरेर पनि मेरै पालामा अर्थात २०२७-२०२८ तिर पढियो । २०२० -२०२१ साल को गाउ फर्क भन्ने अभियान मात्रै नारामा सिमित गराउन पुगे त्यती बेलाका पंचहरुले ।
मेरो ब्याज भन्दा १० बर्ष अगाडिका जेरेसन को पालाको कुरा हो । यो झन्डै २०२० -२०२२ साल तिरको कुरा हो (भनेको सुनेको ) पर्वत जिल्ला को लेखफांट गाबिस मा गाउलेको सहयोगमै एउटा स्कुल खोलिएछ । जुन स्कुल मा गीता चन्डी पढाईन्थ्यो रे । मेरै दाजुहरुले चन्डी को किताब बोकेर स्कुल गयको ताजै जस्तो लाग्छ । त्यती बेलाका विद्यार्थी हरु लाई चन्डी घोकाइन्थ्यो । गाउलेहरुले नै मास्टर को तलव भत्ता को ब्यवस्था मिलाई दिन्थे । जती जना बिद्यार्थी हुन्थे । त्यसैको आधार मा बेतन (तलव ) को किटानी हुन्थ्यो । तर त्यती बेला केही चामल र केही पैसा दिनु पर्थ्यो । नुन घ्यु आलु हरिया तरकारी आदी मास्टर लाई बुझाउन पर्थ्यो रे । त्यस ताका पर्वत जिल्लाकै संकर पोखरी मुढिकुवा फलेवास तिरका मानिस हरु मास्टर भयर जिल्लाको दुर्गम् गाउमा पढाउन जाने गर्थे रे ।
कुरा त्यसै बेलाको हो । एक दिन त्यस गाउका मास्टर (हिमालय नाम ले चिनिने ) लाई बेतन (तलव ) दिने दिन आएछ । यसै क्रम मा सबैले आ-आफ्नो बेतन फिस बुझाएछन । सबैले पैसा चामल तरकारी नुन -घ्यु आदी बुझाई दिएछन ।त्यसै क्रम मा मेरो जेठो दाजु गजाधर सुबेदिको पालो आएछ । मेरो दाजु पनि त अरु भन्दा के कम । सबै विद्यार्थी ले बुझाए जती चामल पैसा तरकारी बुझाई दिनु भएछ । तर मनमा आफु लाई लागेको असजिलो के थियो त मेरो दाजु लाई ? के छुट्याउन सक्नु हुन्छ ?
५ भाई र ४ दिदी बहिनी बाबु आमा सहित् ११ जनाका साथ रहेका गजाधर सुबेदी को गोठमा त्यस बेला २ वटा भैंसी ब्याउने बेलाका थिए भने एउटा भैंसि ले १५ मुठी मात्र दुध दिन्थ्यो । ११ जना लाई १५ मुठी दुध ले अरु भैंसी ब्याउने बेला सम्म गुजारा गर्नु सिवाय अर्को बिकल्प थिएन त्यस घरमा । त्यस्तो अवस्थामा प्राय सबैको घरमा घिउ को अभावै हुन्छ । घिउ को अभावले त्यस घर लाई पनि अछुतो राख्न सकेन । बिहानको दुध बेलुका खाने र दुध माथिको तहर भुटन् को रुपमा प्रयोग गर्ने । बेलुकिको दुध बिहान खाने तहर चाइ चोखिन (भुटन)को रुपमा प्रयोग गर्ने त्यस घरअको दैनिकी जस्तै थियो त्यती बेला ।
जव मेरो दाजुले मास्टर हिमालय लाई आफुले दिनु पर्ने पैसा चामल तरकारी बुझाए - त्यस बेला मेरो दाजु को मुहार अंध्यारो र सरमिन्दा थियो रे । किन भने त्यती बेला का विद्यार्थी पनि अरुलाई हेप्ने गरिव लाई आंखा तर्ने गर्थे रे । शायद त्यही भएर होला मेरो दाजु त्यस घडी मा अली न्यास्रो हुन पुगेको । उता मास्टर हिमालय रेग्मी ले पनि आखा तर्न सुरु गरी हाले । सबै को भाग मा नौनी घ्यु पगालेको सारो करिना घ्यु देख्छन हिमालय मास्टर ले तर मेरो दाजुको पोकोमा एउटै चिजको कमी देखेर मास्टर हिमालयको नेत्र बल्न सुरु हुन्छ । धेरै बेर पछी हिमालय मास्टर ले आफ्ना विद्यार्थी गजाधर सुबेदी मेरा दाजु लाई अली झोक्कियर प्रश्न गरेछन -खोइ त तिमीले घ्यु ल्याएको ? निरिह अवस्थामा रहेका मेरा दाजु ले आफ्नो सिर झुकाउदै हाम्रो घरमा घ्यु छैन रे माणसाप भनी जवाफ दिनु भएछ । त्यसबेला अरु उनका क्लास का साथी हरु पनि हास्न थालेछन् ।
समयले कहिले काही मानिसको दैनिकी मा केही पुर्ती गर्छ भने कहिले काही कुनै चिज को अभाव पनि बनाइ दिन्छ । त्यस दिन दाजु गजाधर सुबेदी लाइ पनि घ्यु को अभावले दुखित त्युल्याइदियो । उता यक जना किसान को छोरो को घरमा घ्युको आभव का कारणले चित्त दुखाउनु भएका माणसाप हिमालय रेग्मी को रिसले नेटै काटेको थियो । जाबो २ थुर्मी घ्यु अथवा २ वटा आलु का डल्ला बरावर को घ्यु ले विद्वान हिमालय लाई के नै पो असर् पर्थ्यो र । उनले आफ्ना चेला लाई राम्रै जवाफ दिएको भए हुन्थ्यो जो कोही ले पनि भन्न सक्छ । माणसाप हिमालय ले कसरी सोधे होलान त त्यो अवस्थामा मेरो दाजु गजाधर सुबेदी लाई ? धेरै गिरेर प्रश्न गरेका छन माणसाप हिमालयजी ले त्यस घडीमा । सभ्यता को ज्ञान त्यस बेलै देखी खड्खियको देखिन्छ । सिक्षित हरुले सामान्य स्वार्थमा अरु पर्ती आक्रोस देखाउनु राम्रो होइन जस्तो मलाई लाग्छ ।
यहाँ माणसाप हिमालय ज्यु ले कस्तो प्रश्न गरे त्यता तिर नजाउं । बरु प्रश्नको थोरै हिस्सा के थियो भने तेरो घरमा केको चोखिन गर्छौ त ? दुहुनो छैन ? मेरो दाजु को एउटै जवाफ थियो ----दुहुनो छैन तहर को चोखो गर्छौं ।